Inona no hatao raha tsy eken'ny Mac anao kapila mafy ivelany | Avy amin'ny mac aho
Mampifandray kapila fitahirizana ivelany amin'ny Mac-nao ve ianao ary tsy fantany izany? Mety hisy ny vahaolana sasany omenay anao fa hanjavona ny olana. Ankehitriny, azo atao ihany koa ny tsy misy miasa na iza na iza amin'izy ireo ary tena manana olana amin'ny seranan-tsambo fanitarana ny solosainao ianao na hoe tsy mandeha tsara ny fitaovana fitehirizana. Hiezaka hanome anao vahaolana maromaro izahay; ny sasany amin'izy ireo dia tena tsotra, saingy misy fotoana izay ny tena miharihary dia ny zavatra voalohany atsipitsika. Raha mampifandray kapila mafy na fitadidiana USB amin'ny Mac ianao ary tsy misy zava-mitranga, ny vahaolana dia mety toy izao manaraka izao.
1 Tsy mandeha tsara ny tariby USB
2 Tsy manana ny fampisehoana kapila ivelany amin'ny Finder ianao
3 Avereno ny System Management Control (SMC)
3.1 Solosaina finday MacBook (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) tsy misy bateria esorina:
3.2 Desktop toa ny iMac, Mac Mini, Mac Pro:
3.3 iMac Pro (dingana samihafa mankany amin'ny iMac mahazatra):
Tsy mandeha tsara ny tariby USB
Ny iray amin'ireo dingana voalohany tokony hojerenao dia raha misy singa ara-batana misy lesoka amin'ireo dingana ireo. Toa adaladala izy io, saingy amin'ny fotoana maro - indrindra rehefa miresaka momba ny vidin'ny bateria isika - ny tariby izay ezahantsika hamahana sy hamakiana ny angona dia tsy mandeha. Amin'izay mba, andramo ny mampifandray an'ity kapila mafy ity amin'ny solo-sainanao hafa ary esory fa ny tariby USB no singa tsy mahomby. Fantatsika fa raha fahatsiarovana USB izany dia tsy maintsy ailikilika ity dingana ity.
Tsy manana ny fampisehoana kapila ivelany amin'ny Finder ianao
Ampifandraisinao ny kapila mafy ivelany na ny fahatsiarovan'ny USB ary zahao fa mahazo hery izy satria miasa ireo tondro LED. Alohan'ny hanohizanao ny dingana manaraka, tsara ny manamarina fa tena eken'ny Mac ilay fitaovana. Ka noho izany dia mankany amin'ny «Finder» isika, mankany amin'ny bara fisakafoanana ary liana amin'ilay safidy «Mandehana». Avy eo dia manisy marika ny safidy «Mandehana any amin'ny folder ...» ary Ao amin'ny boaty fifampiresahana izay miseho dia tsy maintsy soratantsika izao manaraka izao:
Raha mamerina valiny ary ny kapila mafy ataontsika na ny fahatsiarovantsika USB dia hita eo amin'ny efijery, ny antony tsy ahitanao azy ireo eo amin'ny efijery dia lazainay aminao eto ambany.
Antony iray hafa tsy ahafahanao mahita na inona na inona avy amin'ireo singa fitahirizana ivelany ao amin'ny Mac anao ny tsy fanananao safidy marina voafantina ao amin'ny rafitranao. Inona no tiantsika holazaina amin'izany? Inona ary fampahavitrihana tsotra amin'ny safidin'ny Finder sy voila.
Izany hoe, kitiho ny "Finder" ao amin'ny Dock. Mandehana mankao amin'ny bara menio ary tsindrio indray ny "Finder" ary avy eo amin'ny "Prefers". Ho hitanao fa misy takelaka samihafa hanindronana. Eny, izany dia miankina amin'ny zavatra tadiavinao ho valiny farany. Raha te hampifandray ny fitaovanao fitehirizana ivelany ianao dia haseho amin'ny birao. mandehana amin'ny «General» ary safidio ireo singa tadiavinao.
Etsy ankilany, raha tianao hipoitra ao amin'ny sidebar Finder dia safidio ny safidy «Sidebar» ary asio marika ireo safidy tianao haseho ao amin'ilay faritra «Fitaovana».
Avereno ny System Management Control (SMC)
Farany, raha tsy misy amin'ireo vahaolana etsy ambony ireo nanompo anao dia mety ho tonga ny fotoana avereno ny mpanara-maso ny rafitra fitantanana, fantatra koa amin'ny hoe SMC. Amin'ity dingana ity dia tena azo atao ny mampiasa ny Mac antsika indray amin'ny toe-javatra. Na eo amin'ny pejy fanohanana an'i Apple aza dia manana ny dingana rehetra miankina amin'ny karazana fitaovana anananao ianao, avy amin'ny Soy de Mas dia mampandroso azy ireo eto ambany izahay:
Solosaina finday MacBook (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) tsy misy bateria esorina:
Safidio ny menio Apple> Mihidy
Rehefa tapitra ny Mac anao dia tsindrio ny bokotra Shift-Control-Option eo amin'ny ilany havia amin'ny fitendry mitendry, ary miaraka amin'izay dia tsindrio ny bokotra herinaratra. Tano mafy ireto lakile ireto sy ny bokotra herinaratra mandritra ny 10 segondra
Afaho ireo lakile
Tsindrio indray ny bokotra herinaratra handrehitra ny Mac
Desktop toa ny iMac, Mac Mini, Mac Pro:
Rehefa tapitra ny Mac-nao, esory ny tadin'ny herinaratra
Andraso 15 segondra
Avereno atohy ny tadin'ny herinaratra
Andraso dimy segondra, ary avy eo tsindrio indray ny bokotra herinaratra hanombohana ny Mac
iMac Pro (dingana samihafa mankany amin'ny iMac mahazatra):
Rehefa tapitra ny iMac Pro dia tsindrio ary tazomy mandritra ny valo segondra ny bokotra herinaratra
Afaho ny bokotra herinaratra ary miandry segondra vitsy
Tsindrio indray ny bokotra herinaratra handrehitra ny Mac Pro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Inona no hatao raha tsy mahatsapa kapila mafy ivelany ny Mac-nao
Salama, namolavola kapila matevina avy amin'ny windows 7 niaraka tamin'ny MACDRIVE 9 Pro aho, fa rehefa apetrako ao amin'ny Imac G5 (OS X Tiger efa antitra loatra) ary mihazakazaka ilay kapila fametrahana dia toa miasa izy io, saingy afaka kelikely boribory eo afovoan'ny efijery miaraka amin'ny tsipika miampita. Diso ve ny endrika fandefasana kapila? sa inona no tsy eo?
noe breton dia hoy izy:
salama manana fanontaniana aho fa vaovao amin'ity mac pro na paoma ity ary ny fanontaniako dia; Manana mac pro 2015 aho ary tiako hampiasaina ho an'i dj ary ny olana dia manana usb disk ivelany aho ary rehefa mampifandray azy aho ary mametraka azy hilalaovana dia tsy azoko ireo horonantsary misy ireo hira, tsy misy zavatra hafa tonga avy amin'ny feo ary tsy misy horonantsary, manantena aho fa hahatakatra ahy ianao misaotra
Mamaly an'i noe breton
Salama fa nahasoa ahy izy io, nanana olana tamin'ny USB tsy mandeha aho ary noheveriko fa ilay USB mandra-pamakiako ity lahatsoratra ity, misaotra betsaka! Nahita programa iray tany koa aho izay tena nilaiko tokoa hanafoanana ireo viriosy sy ireo zavatra manelingelina izay nivoaka tsindraindray, adwcleaner no anarany.
Mamorona sonia HTML miaraka amin'ny antsipirian'ny fifandraisanao rehetra amin'ny Email Signature Unlimited
Apple dia nametraka ny vola 1.500 tapitrisa euro voalohany amin'ny onitra any Irlandy